URichard Stallman: okuningi ngokushiya kwakhe umsebenzi | Kusuka kuLinux
URichard Stallman: okuningi ngokushiya kwakhe umsebenzi
Isaka | | Izaziso, Okunye
Izindaba ezimayelana ne- Ukushiya kukaRichard Stallman esikhundleni sakhe eMIT naku-FSF Ngicabanga ukuthi kumangaze wonke umuntu. Ngisho Bengingazi ngecala lika-Epstein, ngoba angijwayele ukulandela iTV noma eminye imidiya kakhulu. Bengingazi nhlobo ngokwenzekile futhi bengifuna ukudala i-athikili ememezela izindaba kepha ngaphandle kokumanzi kakhulu ngoba bengingenayo imininingwane eyanele yokuphawula. Kepha manje, okunye ukuphawula (engikuthokozelayo) nemininingwane engikwazile ukuyiqoqa kuleli cala kunginike umbono omuhle wecala.
Okwenzekile uyazi vele, kepha manje sizoya imininingwane eyengeziwe lokho bengingazi, kodwa lokho ngicabanga ukuthi kubalulekile njengokuhambisana nenye indatshana yami ukuze uqonde konke kangcono. Nalapha futhi Ngishiya isixhumanisi sendatshana ebicele ukusula kaRichard Stallman ngamacala akhe ngama-imeyili abekade edaluliwe ngombono wokuthi ama-rms uqobo analo kuleli cala. Ngakho-ke ungabona umthombo wokuqala walolo lwazi odale konke lokhu ...
Kuthiwa, le ntombazane yathatha ama-imeyili angaphakathi eMIT lapho uRichard Stallman anikeza umbono wakhe. Uthi u-Epstein wamcela waya ocansini nelungu le-MIT elidlule emhlabeni ngo-2016 (Marvin Minsky). Futhi uStallman wayezovikela uMinsky ngokuthi uzakwabo wayengakaze alale nentombazane azi ukuthi uyaphoqwa. Ufakazi obesendaweni yesigameko uqinisekisa ukuthi intombazane ifikile, kodwa uMarvin wayichitha.
Kwenze kucace ukuthi UJeffrey Epstein wazama, walahlwa yicala lokushushumbisa izingane, wahlatshwa umkhosi wokuhlukumeza ngokocansi. Ejele lapho ayekhona, wazama kaningi ukuzibulala. Futhi kubonakala sengathi ekugcineni wayithola. Ngo-Agasti 10, 2019, isidumbu sakhe satholwa esitokisini kanti konke kwakukhomba ukuzibulala, yize amanye ama-conspiranoid akhombe ezinye izimbangela ...
Kuyiqiniso ukuthi ezinye izitatimende zikaStallman ezikhishwe kumongo zingazizwa zimbi noma zihunyushwe kabi. Futhi kungenzeka kube njalo. Kuyiqiniso futhi ukuthi kuwo wonke umlando uStallman ukwenzile izitatimende mayelana nezocansi ohambile eshintsha ngendlela yakhe yokubona izinto nokubona lapho engalungile. Ngamafuphi, kula mazwana uthi:
Umuntu ukulungele ukuya ocansini ngokushesha nje lapho efinyelela ebudaleni bobulili (ukuthomba). Nokuthi akukho lutho olungahambi kahle ngomuntu oseminyakeni yobudala yokuya ocansini nomncane enza ucansi ngemvume yakhe nomuntu omdala. [Empeleni, lokhu kwenzeka kaningi emphakathini]
Ngemuva kwengxoxo, wabona ukuthi akukona okomzimba kuphela, kepha kukhona nengxenye yengqondo. Ngakho-ke, cabanga ukuthi osemncane (ngisho nasekukhuleni kwakhe ngokocansi) ulala nomuntu omdala ngoba kungadala ukulimala kwengqondo komncane. [Akahambisani nokudlwengulwa, noma ukuhlukumeza izingane, noma yini efana naleyo]
Kamuva, uyaqhubeka futhi abone ukuthi akulungile ukuthi ingane ilale nomuntu omdala ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Ngisho nangemvume yakho.
1 Uphi ukhiye?
Lokho kusho, Ngibuyela endabeni esemqoka nokusula kwakhe emsebenzini wezikhundla ngalezo zingcindezi. Ngokuqondile kuma-imeyili abanjiwe asetshenzisiwe ngokumelene naye ukuphawula ngecala lika-Epstein nakwabanye. Okushiwo kulawo ma-imeyili mayelana necala engikhulume ngalo ngaphambi kukaMinsky kwaba:
«[…] Igama elithi 'ukuhlukunyezwa ngokocansi' alicaci kahle futhi liyashelela […] wazethula kuMinsky elungiselelwe ngokuphelele.»Ukuphendula intambo yama-imeyili asuka eMIT aye kwabanye abafundi abacele kwinethiwekhi yokuxhumana ukuthi babonise ukuthi kwenzakalani. Kepha uma kuliqiniso ukuthi bekukhona ufakazi obone konke futhi kwenzeka kanjena, uStallman angaba neqiniso.
Konke kwe- icala elibandakanya ongasekho uMarvin Minsky usolwa ngokuhlukumeza ngokocansi esinye sezisulu zika-Epstein. Futhi amagama "ukuhlukunyezwa ngokocansi" anamandla kakhulu kuStallman, ngoba kubonakala sengathi isisulu saphoqelelwa ukuthi sikwenze lokho ngu-Epstein hhayi uMinsky. Mhlawumbe into engabazekayo lapha kungaba ukucabanga ukuthi umuntu ophoqiwe uzibheka "ekuthanda ngokuphelele" ukwenza okuthile, ngoba kungabonakala sengathi bekungokukholwa kwakhe kanti akunjalo. Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi kuphelele lapho ukhiye wokungaqondi.
Lokho ukwahlulela kukaStallman kwakuyigama uqobo lwalo, hhayi amaqiniso. Noma ngubani owazi indaba kaRichard nokuthi unjani uqobo angaqonda izindlela zakhe. Kuthiwa une-Asperger Syndrome, futhi angikwenzi lokho njengezaba. Kepha ngokwami ​​nginezici ezithile kwi-autism spectrum futhi kuyabheda kwesinye isikhathi ukuqonda izinto ezithile abanye abaziqonda kalula.
Kunoma ikuphi, uStallman manje usekukhanyeni futhi uba sematheni ngezitatimende ezimbalwa. Ngifuna ukukucacisa futhi. Ku- alikho icala alenzile (Unikeze umbono wakhe kuphela), ngikushilo endimeni yokuqala futhi ngiyasho futhi lapha ... Yingakho ebonile ukuthi sonke lesi sidididi besibangelwe «uchungechunge lokungaqondani nokungaqondakali kahle".
Angikusho ngaleli cala, noma ngokukhethekile. Ngizibheka njengowesifazane, kepha ngiyacela, abanye besifazane bazibiza ngabesifazane futhi empeleni benza umonakalo omkhulu ebufazini besifazane. Ubufazi besifazane yilobo obufuna ukulingana ngokobulili, hhayi ukufukulwa kwabesifazane kunabesilisa. Lokho kungaba njalo "Hembrismo" noma "misandría" futhi akufanele kudidaniswe nobufazi, ngoba akunjalo. Futhi ngicela ungasebenzisi igama elithi feminazi futhi.
Mayelana nodaba lwezocansi, ngifuna ukukubeka kucace ukuthi ngiyacabanga ukudlwengula njengenye yecala elibucayi kakhulu lokho kungazibophezela, kanye nokubulala. Kepha kunento enyanyeka nje ukuthi umuntu oyenzile akalahlwa yicala bese eyikhokhela, futhi lokho ngukuthi umuntu ongakwenzi futhi ongenacala ulahlwa yicala layo ... ngiyaphinda ngiyasho, angibhekisi ecaleni elithile, kodwa Kubonakala kubucayi kimi.
Imininingwane eminingi nolwazi ngalesi sihloko, ukuze ukwazi ukuthola iziphetho zakho (Kubhalwe ngesiNgisi, kepha kufanelekile ukufundwa, noma ngabe kuhunyushwa uma ungasazi isiNgisi, ngoba inemininingwane ethakazelisa kakhulu, ikakhulukazi i-athikili yesibili):
Ngobuholi bukaRichard Stallman we-FSF.
Ukuvuma kohlelo osebenze isikhathi eside noRichard Stallman.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » URichard Stallman: okuningi ngokushiya kwakhe umsebenzi
U-Ado Ello kusho
Angiyazi kahle le ndaba ... ngike ngaya ezingxoxweni zakhe zeGNU futhi kuyihlazo ukuthi indaba iphele kanjani.
Phendula u-Ado Ello
Futhi konke kwabathile abafuna isimilo abafuna ukwenza impikiswano bazikhangise, ngehlaya elengeziwe lokuthi lisemphakathini obanikeza inkululeko yombono! Okudabukisayo ukuthi wesulile emsebenzini, kulezi zimo ngithanda ukufaneleka kukaTorvalds kakhulu, ubebathumela ukuthi bathathe umoya futhi kuzohlala kuhlanzekile.
Ngikholelwa ngobuqotho ukuthi azikwazi ukuba nezinye izihloko kule ndatshana. Futhi noma ngabe umbhali uzibiza 'ngesifazane', ngicabanga ukuthi kufanele acabange ngakho. I-RMS ngokuzithandela nangokuzimisela (akekho noyedwa obuzile) uthathe isinqumo sokweseka umuntu olala nomuntu omncane oshushumbisiwe. Futhi esikhundleni sokuvala noma ukubuza uhlobo lwalo octogenarian oshiwo, wanquma ukubuza ingxenye esengozini kakhulu. Futhi lokhu kuyingxenye yomlando wezimo zengqondo ezilulazayo eqenjini labesifazane.
Futhi ngoNkulunkulu, ubufazi (lowo umbhali athi akusibo "bangempela", kube sengathi bunamandla athile okunquma ukuthi ngubani ngempela) ufuna ukulingana phakathi kwabo bonke kodwa kuvela ukuthi empeleni abukho futhi buvezwa izindawo eziningi. Kubukeka sengathi kubuchwepheshe ngisho nasekunyakazeni kwe- "software yamahhala" (njengoba kwenzeka nakwezinye izimo zobushoshovu) futhi.
1-Musa ukubeka icala futhi unganikeli ubufakazi. Ngitshele ukuthi yiziphi izihloko ozibonayo.
2-Ngingowesifazane, akudingeki ngicabange ngalokho. Kepha kukhona abanye abazifihla ngaphakathi kwesifazane ukuze babhubhise ubufazi uqobo.
Isibonelo, labo ababeka imibono yezepolitiki kuyo, ngoba lokhu akuyona into engakwesokunxele noma kwesokudla, kuyinto yawo wonke umuntu.
Umbono we-3-RMS uye ohlwini lwama-imeyili futhi ungumuntu ozama ukungakhethi. Ubuze kuphela ukusetshenziswa kwegama "ukuhlaselwa" hhayi isenzo uqobo. Ngiyakuqonda ukuthi ukusho ukuhlaselwa kufana nokuthi uMevin uphuthume kumuntu ohlukunyezwayo, futhi kubonakala sengathi isisulu besivele siphoqelelwe ukuthi senze njalo. Angikho lapho futhi anginayo idatha eyanele ngakho-ke angikwazi ukusho okuningi.
Isimo sengqondo sokudelela 4? I-RMS ezingeni lomphakathi ayiyona engcono kunazo zonke, futhi iTorvalds nayo (bheka iCoC, nosizo lwamukelwe). Angiyiphathi kahle nami. Kepha okungenani ngizama ukuba nobulungiswa ngangokunokwenzeka. Futhi awukwazi ukudubula umuntu bese uzibuze ukuthi mhlawumbe bebengenacala yini. Kulokhu i-RMS inikeze umbono wayo iyodwa. Futhi ukube benginokuthi, ngokwesibonelo, ngivela ku-Epstein, khona-ke bengingeke ngivune i-RMS. Kepha bekungenjalo.
5-Nginegunya elifanayo nelakho lokuchaza ubufazi. Ukulingana akukho, yingakho ubufazi bukhona. Lokho kuyabonakala. futhi? Ngibhale ini ngenye indlela?
Ngiyacela, ngicela ukubuza konke ukuphawula okuzayo uma kunesidingo sokugxeka engikubhalile (uma beqinisile ngizokuvuma), kepha hhayi lolu hlobo lwamazwana ngaphandle kwesisekelo futhi ungihlulela ungangazi nakancane, amaphrojekthi enginawo ezungeze ubufazi (nokuhlanganiswa kwabesifazane ku-STEM), noma izenzo zami… Ngiyabonga.
1- Amadoda avikela abesilisa abashushumbisa ukushushumbiswa kanye nezinye izindlela zokuziphatha ngokobulili, babala njengo- "hembristas" noma "feminazis" (yebo, ngiyazi ukuthi awukwenzi lokhu ekugcineni) abesifazane abavikela amalungelo abo ngendlela engakhululekile yabesilisa. ezibacindezelayo ...
2- Ubufazi NGOKWEzepolitiki. Injani i-software yamahhala, i-veganism, ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu noma ukulwa nobandlululo nokuzonda abathandana nobulili obufanayo. Konke kuphathelene nezepolitiki, ngakho ukuhlutha ubufazi akuyona into "yabesifazane" kakhulu. Futhi ukuyihlanganisa nephoyinti 5, mhlawumbe mina nawe sinegunya elifanayo lokuyichaza. Kepha ngubani ngempela onegunya lokukuchaza yilabo abaphikisana nomzabalazo: abesifazane. Hhayi thina.
3- "Umbono we-RMS uye ohlwini lwama-imeyili futhi ungumuntu ozama ukungakhethi." Angazi ukuthi uzama ukuba yini noma cha, ngazisa izenzo zakhe kuphela. Ngombono wami, ukuthumela incwadi (obekungekho noyedwa owayeyicelile) ukusho ukuthi "umhlaseli" kwakuyigama elingalungile kumngani wakhe kwakuwumzamo wokuphindaphinda futhi anciphise lokho ayekwenzile. Futhi kubucayi ngendlela efanayo.
4- Izinto eziningana: Angizange ngibubone ubulungiswa bakho lapho ngisebenzelana nabangane bakho. Ngokuqondene ne-RMS, ukusho ezingxoxweni ukuthi kabakhumbuli ukuthi kukhona umuntu wesifazane owayenentshisekelo yokufaka isandla kwi-FSF (lapho-ke kwakukhona abesifazane ababekwenzile lokho ngesikhathi sokuxoxwa) noma beya emnyango wabo [[…] "amantombazane athandekayo" yizimo zokubukela phansi abesifazane. Okwahlulelwayo ukuthi lezi zimilo zilimaza kanjani iqembu labesifazane emhlabeni kwezobuchwepheshe. Ukuphawula nemibono kunemiphumela ngakho-ke kubalulekile.
Nginike umbono wami ngokususelwa embhalweni owubhalile nezimpikiswano engizinikezile zisuselwa kuwo. Ngokusobala angazi okuningi ngempilo yakho.
Ukusuka ekwaziseni uze unikeze umbono kushiya le ndatshana yokuhlela ibhalwe kabi futhi, ngokunikeza umbono ngodaba oluyimbangela olungaphandle kwendikimba enkulu phakathi kokushaywa amabele, kunciphisa ubuchwepheshe besiza. Kuyishwa.
Ukuqhuma kwesifuba ????
Ngokusho kwakho, lolu hlobo lwesihloko lungcono, akunjalo?
Sisiza ekwakheni umhlaba lapho inkululeko yombono izonyamalala, nalapho imibono izokwanela ukuletha umuntu ecaleni. Angicabangi ukuthi lokho kulungile ...
U-Isaac, kushaya isifuba empini yokuphawula. Umshicileli ungummemezeli futhi ngikholelwa ukuthi akudingekile ukuthi uvikele noma uthethelele; ukusabela sekuvele kuyisibonakaliso sokwehlulwa.
Wayezama ukubeka umbono owakhayo. Noma ngabe uyavumelana noma cha nokuqukethwe, ngaso sonke isikhathi sazisa isikhathi sakho nomzamo wakho.
Kuyaphikiswa ukuthi umbhali uzibiza "ngomuntu wesifazane".
Ngishiya ingxenye yendatshana ethokozisayo ngale ndaba.
“Masikhumbule futhi ukuthi hhayi uStallman kuphela ophumele obala ukuzovikela umqondisi weMIT, uJoishi Ito. Futhi amanye amadoda adumile avela emhlabeni wezamasiko afana ne-Lessig neNegroponte akwenzile. Sanele lesi simo somhlambi wamadoda esivikela amadoda ngeqiniso lokuthi angamadoda. Akukho "ukuzingelwa kwabathakathi" okuvela enhlanganweni yabesifazane.
Abesifazane baye bephulwa futhi bayaqhubeka bephulwa kuzo zonke izindawo ngabesilisa abasebenzisa amandla abo futhi basebenzise isikhundla sabo: kumabhayisikobho, ku-opera kanye nasenkampanini yezobuchwepheshe nokunyakaza komphakathi. Futhi thina madoda siyaqhubeka nokuzimisela ukungakunaki ngoba akuthina esihlukunyezwa yilolu dlame kepha yilabo abalusebenzisayo. "
Le ndaba ibucayi impela, kepha kuhle ukuthi kuphakanyiswa ulwazi ngomonakalo oludalayo ... ngeshwa lolu shintsho lweparadigm lubuhlungu futhi noma ngabe ubandakanyeka kancane kangakanani, sekuyisikhathi sokuthi wonke umuntu enze okuthile. Inkinga esiyibona lapha ukuthi amazambane ayashisa kangangokuthi noma ngubani osondela kuwo angasha. Ngiyethemba yonke into izosebenza ngendlela enhle kakhulu kuMnu Stallman. futhi u-Isaac awathathi imibono yethu esiyifaka enhliziyweni, uwena umhleli lapha futhi uma sifunda okuthunyelwe kungenxa yokuthi sicabanga ukuthi yizinto ezinhle zokwazisa. Ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi owenzayo.
Yebo, kuzoba ngcono ukushiya isihloko kuze kube yilapho kunemininingwane eminingi futhi wazi ukuthi konke kuphetha kanjani.
IGnome 3.34 iyatholakala, yazi ukuthi yini okusha kunguqulo entsha